Gadzirisa WordPress Jetpack Shortcode Widths | Martech Zone
China, August 29, 2013 Mugovera, October 24, 2015 Douglas Karr
Kana WordPress yaburitsa iyo Jetpack plugin, ivo vakavhura avhareji WordPress kuisirwa kumusoro kune mamwe makuru maficha ayo avanosanganisira pane yavo yakagadziriswa mhinduro. Paunenge iwe wagonesa iyo plugin, iwe unogonesa toni yezvinhu, kusanganisira shortcodes. Nokusingaperi, WordPress haibvumire wako wepakati munyori kuwedzera midhiya kunyora mukati mezvinyorwa zvechipositi kana peji. Ichi chiitiko chekuchengetedza uye chakaitirwa kudzikisira mikana yekukanganisa saiti yako.
Nekudaro, uine mapfupi makodhi, mushandisi wako anogona kupinza midhiya zviri nyore. Semuenzaniso, kuisa vhidhiyo yeYouTube, hapana chikonzero chekuwedzera embed script - iwe unongoisa iyo yakagovaniswa URL kune vhidhiyo mune iwo mavara edhita. Iko kusunganidzwa kwema shortcodes kunozivisa nzira uye kunotsiva iyo URL neiyo chaiyo vhidhiyo kodhi. Hapana kupokana, hapana nyaya!
Kunze kweimwe. Uchishandisa mapfupi makodhi, hupamhi hwemidhiya yako yakadzika yakangotadza. Saka Youtube inogona kuwedzera pamusoro pehupamhi hwehunhu hwako uye ichidurura pasidebar yako - kana Slideshare inogona kutora hafu yenzvimbo iyo yainogona kutora. Ini ndakaita anononoka maawa mashoma kuyedza kuona maitiro ekunyora mamwe mafirita kuti akwanise hupamhi hwega yega nzira pfupi. Ndakaongorora toni yemapulagi kuti ndione kana paive neimwe yatove kunze uko.
Uye zvino ini ndakachiwana… kupenya kushandurwa kudiki uko WordPress yakawedzera kune yavo API. Kugadziriswa uko iwe kwaunogona kuseta iyo hupamhi hwezvinyorwa pane ako mapeji uye zvinyorwa:
kana (! isset ($ content_width)) $ zvemukati_width = 600;
Pandakangomhara iyi upamhi mune yangu theme's function.php faira, midhiya yese yakadzamidzirwa midhiya yakakwenenzverwa mushe. Ndichiri kufara kuti zvakangotora mutsara wekodhi, ini ndakakura kwazvo kuti zvakatora nguva yakareba kuwana izvi. Kunyanya kufadza kushomeka kwekugadzirisa kunowanikwa ne Jetpack. Shortcode, semuenzaniso, haigone kuremerwa - inogoneswa sekureba sekuti plugin ichibvumidzwa.
Zvingave zvaipenya, semuenzaniso, kuwedzera yakanyanya upamhi uye kukwirira kumisikidzwa zvakananga pa Jetpack Shortcode masetwork. WordPress ipuratifomu yakadaro inoshamisa, asi dzimwe nguva kuwana mhinduro kunogona kunetsa!
Tags: urefuJetpackshortcodeslideshare upamhivimeo upamhiupamhiWordPresshupamhi hweYouTube
Ipa rako reWordPress Saiti Mamwe Flare